Heshiiska qarsoodiga ah ee ka dhaxeeya Xasan C. Kheyre iyo Aadan Daa’uud, danaha Kenya iyo wakiilnimada Kheyre - Allbanaadir
Home Warka Maanta Heshiiska qarsoodiga ah ee ka dhaxeeya Xasan C. Kheyre iyo Aadan Daa’uud,...
Heshiiska qarsoodiga ah ee ka dhaxeeya Xasan C. Kheyre iyo Aadan Daa’uud, danaha Kenya iyo wakiilnimada Kheyre
Qareenka lagu magacaabo Aadan Daa’uud oo kamida qareenada Soomaali-Kenyan ee ka howlgala dalka Kenya ayaa afartii sano ee la soo dhaafay waxa uu ganacsi gaar ah kula jiray Xasan Cali Kheyre. Ganacsigaan oo isugu jira ka ganacisga dhulka, Arimaha ceymiska, xaraashka shidaalka Soomaaliya iyo ku ganacsiga karamaada calanka Soomaaliya. Waxa ay sidoo labadaan shaqsi ka sameeyeen isku day la doonayay in lagu iibsado madaxda dalalka Kenya iyo Soomaaliya si loogu gaaro dani gaar ah.
War-bixintaan ayaa qayb ka ah baaritaan balaaran oo lagu sameeyay ficilada wadajrka ah oo ay labadaan shaqsi (Kheyre iyo Aadan) isugu dayeen in ay ku qiyaanaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo natiijada ka dhalatay
Shaqaleynta Aadan Daa’uud Walaalkiis
Aadan Daa’ud walaalkiis oo lagu magacaabo Cali Daa’uud, ayaa dabayaqadadii sanadkii 2017, waxa shaqo laga siiyay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya oo uu markaas ahaa Xasan Cali Kheyre. Cali Daa’uud ayaa loo magacaabay lataliyaha Ra’iisal Wasaaraha ee Arimaha Bey’adda. Jagaadaan oo ah mid loo abuuray ninkaas ayaa ahayd mid aan horay u jirin, mana jirto wasaarad ay si taasa u hoostagto. Abuuritaanka jagaadaan ayaa ahayd mid lagu naasnuujinaayay Qareenka Aadan Daa’uud iyo qooyskiisa.
Cali Daa’uud oo inta badan ka maqnaa dalka Soomaaliya amaba aan u soo xaadirin shaqo ayaa mushaar ahaan waxa xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Kheyre laga siin jiray mushaar gaarayay $11,000 (kow iyo toban kun ) iyo $3,000 (sadax kun) oo guno ah. Waxa sidoo kale uu si aan joogta ahayn uu u deganaaa hoteelka Doorbin oo lacagtiisa la sheegay in laga bixin jiray xafiiska Ra’iisal Wasaaraha.
Ujeedada ninkaan shaqada been abuurka ah loo siiyay ayaa ahayd in lagu naasnuujiyo wiilka ay walalaka yihiiun qareenka Aadan Daa’uud oo isaga iyo Xasan Kheyre uu uu ka dhaxeeyo ganacsiyo badan oo ay ku jiraan abuurista hay’ada ceymiska ee Tawakal.
Qareenka Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha
Maadaama ayan jirin cid la xisaabtameyso Xasan Cali Kheyre oo isaga kaliya uu lahaa go’aanada la xiriira ku tagri falka dhaqaalaha xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, waxa uu mushaar joogta ah u qoray Qareenka Aadan Daa’uud. Sida ay xaqiijiyeen labo qof oo kamida howlwadeenadii ka shaqeyn jiray xafiiska Xasan Kheyre. Mushaarka ayaa lagu bixin jiray magaca shaqsi kale, lacagta waxaa loo soo marin jiray walalkiis.
Dhanka kale ma aysan noo suuragalin in aan helno cadadka lacagta uu Qareen Aadan Daa’ud sida dadban uga qaadan jiray xafiiska Ra’iisal Wasaaraha. Xasan Kheyre iyo Aadan Daa’uud ayaa aad uga taxadaray in la ogaado cadadka lacagta la bixiyo dhowr sababood awgood. 1) Hadii lacagtaas lagu cadeeyo in Aadan Daa’uud uu ka qaadan jiray Xafiis Dowlad Soomaaliyeed, waxa laga rabaa in uu la socodsiiyo dowlada Kenya si uu canshuur uga bixiyo, 2) Xasan Kheyre oo aan marnaba doonaynin in la ogoaado bixinta lacagta uu siiyo saaxiibkiis.
Iibinta iyo beecinta dhulka Masa Maara ee dalka Kenya
Sanadkii 2018 ayaa Xasan Kheyre waxa uu dhul lagu sheegay sideed Higtar uu ka iibsaday degaanka loo dalxiis tago ee Masa Maara ee dalka Kenya. Dhulka oo dhaqaale faraban lagu iibiyay, ayaa la rumeysn yahay in lacagta lagu iibiyay ahayd lacag laga soo dhacay shacabka Soomaaliyeed. Xasan Kheyre ayaa u xilsaaray Qareen Aadan Daa’uud in uu dhulkaas isaga iibiyo, maamulana.
Xasan Kheye ayaa horaantii sanadkaan waxa uu dib isaga iibiyay dhulkaas, mar kale iibinta dhulkaas waxaa gacan ka geystay Aadan Daa’uud. Hagida iyo isticmaalka lacagtaas ayaa waxa maamulaayay Qareen Aadan Daa’uud iyo ganacsadaha lagu magacaabo Ismaaciil Gooni oo lacagta qaar isaga la soo mariyay.
Guursashada Gabar Ehel la ah Xasan Kheyre
Xasan Kheyre oo rumeysan in Qareen Aadan Daa’uud uu yahay qofka kaliya ee u furi kara albaabada hogaanka dalka Kenya, ayaa waxa uu Aadan Daa’uud oo caruur waaweyn leh, ku qalqaaliyay in loo guuriyo gabar ka soo jeeda beesha Murusade.
Xaflad kooban oo si hoose loo soo agaasimay ayaa loo qabtay guurka Qareen Aadan Daa’uud iyo gabadha uu adeerka u yahay Xasan Cali Kheyre. Ujeedada guurkaan ayaa mid la doonayay in si hoose la isugu soo dhaweeyo Xasan Kheyre iyo Aadan Daa’uud. Ujeeda Rasmigana waxa ay ahayd in si buuxda loo soo xiro galiyo Aadan Daaud oo aad loogu tuhmayo (ama sida uu sheegto) uu gacanta ku hayo Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Qaban-qaabada iyo soo dhaweynta Safarkii Xasan Kheyre ee Kenya
Dhowr bilood ka dib markii Xasan Kheyre laga soo ceyriyay xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, kuna dhawaaqay in uu noqdo Musharax Madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu codsaday in uu safar aad loo buunbuuniyay uu ka tago magalaada Nairobi ee dalka Kenya.
Qareen Aadan Daa’uud ayaana loo xilsaaray qaban qaabada iyo soo dhaweynta Xasan Kheyre. Inta uu socday barnaamijka soo dhaweynta Xasan Kheyre, Aadan Daa’uud waxa la dajiyay Hotelka Radisan Blue ee ku yaala meel aan ka fogaynin Madaxtooyada dalka Kenya.
Sida uu Aadan Daa’uud u xaqiijiyay saaxibadiisa gaarka ah, isaga oo istcimaalayo lacag fara badan waxa uu ku guulaystay in uu kulan gaar ah u qabto Xasan Kheyre, kaas oo ay ka soo qaybgaleen 12 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya. waxaa la xaqiijiyay in xildhibaanadaas intooda badan la siiyay lacag si ay u yimaadaan shirkaas. Lacagta ku baxday shirarka inta uu Kheyre joogay Nairobi waxa si wadajira u maamulaayay Aadan Daa’uud iyo Maxamed Cabdkarin Gaanbe oo ehel la ah Xasan Kheyre.
Fadeexada ka dhalatay Safarkii iyo kulamadii Kheyre ee Nairobi
Qaar kamida Xildhibaanadii ka soo qaybgalay kulankaas ayaa bartooda bulshada soo galiyay in Xasan Kheyre uu kulankaas ka sheegay in uu si ka baxsan maxkamad uu u xalin-doono dacwada Badda ee ka dhaxeeysa ladada dal. Arintaan ayaana waxa ay ka dhex abuurtay shacabka Soomaaliyeed fal-celin balaaran, aadna looga soo horjeestay hadalka ka soo yeeray Xasan Kheyre.
Dhanka kale, Xasan Kheyre ayaa intii uu joogay dalka Kenya waxa uu bartiisa Facebook soo dhigay sawir ay kawada muuqdeen isaga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta. Ujeedada uu Kheyre u soo dhigay sawirka bartiisa ayaa ahyd in uu u muujiyo in uu kulan la qaatay Madaxweyne Uhuru Kenyatta in uu ku jiray safarkiisa.
Sawirka uu Xasan Kheyer soo dhigay bartiisa ayaa ahayd sawir been abuur ah, waxa uuna ahaa sawir la qaaday sanadkii 2018 markii uu booqashada ku yimid dalka Kenya isaga oo huwan magaca xafiiska Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya. Ficilkaan been abuurka ah ee uu sameeyay Xasan Kheyre waxa uu keenay in uu ka badbaado in gabi ahaanba dalka laga masaafuriyo iskaba daa in ay dawlada Kenya isaga si qaasa u qaabisho. Waxa uuna ku noqday Soomaaliya isaga oo aan helin fursad uu kula kulmo mas’uuliyiin ka tirsan dalka Kenya.
Iibinta iyo beec-geynta Xasan Kheyre
Xasan Kheyre ayaa sheegay in uu dhaqaale gaarayo $400,000 ku bixiyay sidii uu ku heli lahaa taageerada madaxda dalka Kenya. Aadan Daa’uud ayaa ahaa qofka gacanta ku hayay maamulka iyo qarashgaraynta dhaqalahaas. Xasan Kheyre oo ah shaqi lagu yaqaano faanka ayaa ugu sheekeeyay saaxiibadiisa in uu gabi ahaanba iibsaday madaxda dalka Kenya.
“waxa aan idin sheegayaa Kenya waa beec, 20 sano ayaan deganaa hantina waan ku leeyahay dalkaas, walaahi qofkastaa oo uu ku jro kan ugu sareeyo, Uhuru Kenyatta, waa beec. Markii aan joogay hay’adda NRC waxa aan guryahooda lacagta ugu geyn jiray madaxda Kenya, wixii aan doonana waan ka sameeysan jiray”, ayuu yir Kheyre oo qoslaayo.
Waxa uu ku daray “ hada waxaan idinkuugu bishaaraynayaa in aan gacanta ku soo dhigay madaxda nabadsugida iyo sirdoonka kala duwan ee dalkaas, aniga ayaana ay i taageersan yihiin, Farmaaja-na in aan god ku sii rido lacag badan oo aadan qiyaasi karin ayaa iiga abxaday”
Kheyre ayaa dhankiisa cadeeyay in Qareen Aadan Daa’uud uu laf dhabar u ahaa guusha uu ka soo hooyay dalka Kenya iyo in la sii kala fogeeyo Farmaajo iyo Kenya. Waxa muuqata in Aadan Daa’uud uu dhaqaale fiican ka sameeyay dalka Soomaaliya intii uu Xasan Kheyre Ra’iisal Wasaaraha ahaa iyo hada uu musharax yahay.
Shirqoolka Peter Kagwanja , Adan Daa’uud iyo Xasan Kheyre
Peter Kagwanja oo ah ninka qaba wasiirka difaaca ee dalka Kenya , Marwa Monica Juma oo kamida dadka lacagaha fara badan ka sameeyay Soomaaliya xiligii Xasan Kheyre uu ahaa Ra’iisal Wasaaraha ayaa dhankiisa waxa uu wadaa qorsho la doonayo si toos ah loo xaraasho khyeraadka dalka Soomaaliya.
Peter iyo Aadan ayaa waxa ay si wadajira u diyaariyeen mashruuc loogu magac daray, mashruuca “lixda bilood” kaas oo lagu meel-marinayo hirgalinta “mashuurca xaraashka kheyreraadka dalka Soomaaliya mudo lix-bilood gudahooda ah. Peter ayaa hada ka qaata Kheyre mushaar lagu sheegay “latliyaha arimaha Siyaasadda” ee musharax Kheyre.
Peter Kagwanja oo ah shaqsi aan qarsanin xiriirka kala dhaxeeya Aadan Daa’uud iyo Xasan Kheyre ayaa dhowr mar wareeysiyo uu siiyay taleefishinada dalka Kenya ku sheegay taageerada uu u hayo Xasan Kheyre iyo damaciisa uu doonayo in uu dalka Soomaaliya uu kheyraadkiisa isaga wax ka maamulo. Halkaan ka daawo wareeysiyada Peter Kagwanja: https://www.youtube.com/watch?v=vWEPqSwXmK4 iyo halkaan https://www.youtube.com/watch?v=6pCJJC4PHe8
Aadan Daa’uud oo musharax Xildhibaan u sharxan
Dhanka kale, Xasan Kheyre ayaa ay ka go’an tahay in uu Qareen Aadan Daa’uud uu ka soo dhigo Xuldhibaan laga soo doorto Deegaanka Wajeer ee dalka Kenya. Kheyre ayaa ku faanaya in uu dhaqaale fara badan u huray sidii Adan Daa’uud uu u noqon lahaa xildhibaan saameeyn ku leh siyaasada dalka Kenya taas oo sahleysa in ay labadooda ka shaqeeyaan sidii loo dar-dar galin lahaa boobka hantida umadda Soomaaliyeed.
Boobka iyo Xaraashka Hantida Soomaaliyeed
Aadan Daauud iyo Xasan Kheyre ayaa u muuqda in ay ku heshiiyeen in si buuxda loo xaraasho kheyraadka dalka iyo dadka. Sida ay ilo xog’ogaal ah ay xaqiijiyeen, Waxaa jira qorshooyin la doonayo in lagu dhaco Kheyraadka dalka, gaar ahaan xaraashka guud ee Kheyraadka dalka.
Aadan Daa’uud iyo Xasan Kheyre waxa ay shirko ku yihiin dhowr mashruuc oo hada ka jira dalka Soomaaliya iyo qaar kale oo la doonayo in lagu soo gacan galiyo magaca iyo jiritaanka dalka Soomaaliya.
La soco qaybaha danbe:
Waxa aanu qormooyinka soo socda idinkuugu soo gudbin doonaa qaabki iyo isku daygii ay labadaa nin sameeyeen si loo iibsado karaamada Umadda Soomaaliyeed, lacagaha la isku dayay in lagu iibsado hay’adaha kala duwan ee dalka Kenya iyo doorka Aadan Daa’uud ku leeyahay qorshooyinkaas.